सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको बीमाशुल्क १७ प्रतिशतले बढ्यो , अन्य सूचक कस्तो ? – Insurance Khabar
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको बीमाशुल्क १७ प्रतिशतले बढ्यो , अन्य सूचक कस्तो ?
प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७६, बिहीबार १४:४८
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा ४८ करोड ६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क मार्फत आर्जन गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले गत बर्षको सोहि अवधिमा ४४ करोड २७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । गत बर्षको तुलनामा कम्पनीको कुल बीमाशुल्क आर्जन १७ प्रतिशतले बढेको हो ।
कम्पनीले पुस मसान्तसम्म्मा कम्पनीले २ जार ७ सय ४९ वटा बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छ भने सो बापत कम्पनीले ४६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बीमीतहरुलाई दाबी रकम प्रदान गरेको छ ।समिक्षा अवधिमा कम्पनीको नाफा गत बर्षको तुलनामा बढेर ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत बर्षको सोहि अवधिमा कम्पनीले ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो ।
यस्तै कम्पनीको खुद बीमाशुल्क आर्जन ९ प्रतिशतले बढेर ४८ करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले गत बर्षको सोहि अवधिमा ४४ करोड २७ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो ।कम्पनीले हालसम्म ७७ हजार ५ सय ९४ वटा बीमालेख जारी गरेको छ भने नविकरण बीमाशुल्क मार्फत कम्पनीले पुसमसान्तसम्ममा कम्पनीको १२ हजार ५ सय ६६ वटा बीमालेख नविकरण भएका छन् ।
कम्पनीले पुस मसान्तसमम्मा पुनर्बीमा कमिशनबाट १७ करोड ६७ लाख , लगानी कर्जा तथा अन्य आयबाट ४ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने जगेडा कोषमा २० करोड ७५ लाख रुपैयाँ र बीमा कोषमा ७२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ संचित रहेको छ ।
कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ९८ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ २ सय १ रुपैयाँ ५२ पैसा रहेको छ ।